Saigon-Muine-Dalat- Hanoi-Halong VIETNAM Package Tour - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
Saigon-Muine-Dalat- Hanoi-Halong VIETNAM Package Tour
Tour Price: Tour only Package Deal =US$315 per person for 10 pax group (twin/triple-sharing room at4Star Hotel) Price offer valid till 23rd December 2019 Tour Type: MIS/OT/AS-41/2019/Vn (Outbound) Tour Duration:6Days5Nights
This trip offers you to experiencealittle of the best of everything in Vietnam.
Be in Ho Chi Minh also known as Saigon,amodern and the largest city in Vietnam and getachance to admire some of the most beautiful designed building structures like the Notre Dame Cathedral and Old Saigon Post Office.
Swim at Mui Ne Beach, one of the most beautiful beaches in Vietnam, and visit nearby attractions like the Red dunes, the white dunes, or the fairy stream
A trip to Dalat, located in the central highlands of Vietnam, to visit Thien Vien Truc Lam Monastery,aZen Buddhist temple and nearby Datanla waterfall, recognized asaCultural historical heritage, and into the city to admire the City Flower Garden and also the Crazy House listed as one of the world’s ten most “bizarre” buildings
Visit Halong bay _ listed asaUNESCO World Heritage Area of outstanding natural beauty
A brief sightseeing tour to Ho Chi Minh Mausoleum, One pillar Pagoda, Temple of Literature, Hoan Kiem Lake, Ngoc Son Temple, Tran Quoc Pagoda, West Lake, to save lasting memories of Hanoi
Go shopping at Dong Xuan Market, Hanoi’s famous 36 old streets
DAY 1: YANGON DEPARTURE – ARRIVAL HO CHI MINH CITY (D)
DAY 2: SAIGON – MUI NE BEACH (B/L/D) 215km (5 hours drive)
DAY 3: MUI NE BEACH – DALAT HIGHLAND (160KM – 3.5 HOURS)(B/L/D)
DAY 5: HANOI- HALONG – HANOI (B/L/D)
DAY 6: HANOI DEPARTURE – YANGON ARRIVAL ( B/L/D)
Children is shared with their parents with daily breakfast
Private Coach with air conditioner
Dalat Cable Car for one way
Daily mineral water is 02botle /pax/day
English & Chinese speaking Guide.
Yangon – Saigon – Dalat – Hanoi – Yangon trip airfare
Jeep car is 6usd/pax ( if guest request it)
Tip for Guide and Driver is 2usd/pax/day for group 10pax up
Tip for Guide and Driver is 3usd/pax/day for group 2-9pax
ဟိုတယ်၌ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းကိုနှစ်ဦးမျှနေထိုင်သည့်စံနစ်ဖြင့် နံနက်စာပါ ပါဝင်ပြီး ၅ ညအိပ် တည်းခိုနိုင်ခြင်း
ခရီးစဉ်တလျှောက် Air-Con မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ပို.ဆောင်ပေးခြင်း
အထက်ဖေါ်ပြပါခရီးစဉ်အရ ၀င်ကြေး ပေးခြင်း
Dalat Cable Car တစ်ကြောင်း စီးခ
Water Puppet Show ရုပ်သေးပွဲဝင်ကြေး
ခရီးသည်တစ်ဦးအတွက် တစ်ရက်လျှင် (၁) လီတာ ရေသန်.(၂)ဘူး
ခရီးစရိတ်တွင် အောက်ပါများ မပါဝင်ပါ။
ရန်ကုန်-ဟိုချီမင်း-ဒါလတ်-ဟနွိုင်း-ရန်ကုန် ခရီးစဉ် လေယာဉ်စရိတ်
ခရီးသည်အလိုရှိပါက ဂျစ်ကားငှါးရမ်းခ ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် US$6
ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ယာဉ်မောင်းအား ပေးဆောင်ရမည့်TIPS(ပုံမှန်အားဖြင့် ခရီးသွားဦးရေ (၁၀)ဦး နှင့် အထက် ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် တစ်ရက်ကို US$2 နှုန်းနှင့် ခရီးသွားဦးရေ (၁၀)ဦးအောက်အတွက် ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် တစ်ရက်ကို US$3 နှုန်း)
DAY 1:	YANGON DEPARTURE – ARRIVAL HO CHI MINH CITY (D)
Vietnam Airlines Flight No: VN942 (RGN)12:10 pm – (SGN)15:05 pm
Upon arrival at Tan Son Nhat International airport, our Driver will meet you and transfer to hotel for check in. The rest of the day visit the Notre Dame Cathedral, Old Saigon Post Office. Dinner will be served at Saigon Cruise restaurant with music performance. Shopping at Saigon Shopping Mall/Ben Thanh night market.
ဟိုချီမင်း မြို့ရှိ Tan Son Nhat အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သို့ ရောက်ရှိသောအခါ ဒေသခံ Tour Guide မှ လာရောက် ကြိုဆို မည်ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်သို. check in လုပ်ရန် ပို.ဆောင်ပေးမည်။ ကျန်အားလပ်ချိန်တွင် the Notre Dame Cathedral, Old Saigon Post Office သို.သွားရောက်လေ.လာမည်။ ညစာကို Saigon Cruise restaurant ပေါ်၌ တေးသံသာ နားဆင်၍ မြိန်ယှက်စွာသူံးဆောင်မည်။ ထိုနောက် Saigon Shopping Mall/Ben Thanh night market တွင် ဈေးဝယ်ထွက်မည်။ ဟိုချီမင်း မြို့ရှိ ဟိုတယ်တွင် အနားယူ အိပ်စက် ပါမည်။
Morning: Buffet breakfast at hotel.
Pick up you to transfer to Mui Ne Beach – as one of the most beautiful beach destinations of Vietnam.
Arrival Mui Ne Beach at noon. Have lunch at Cay Nhan restaurant. Then visit:
Back to Hotel for check in, Swim at Mui Ne Beach. Dinner at Vietnam home restaurant.
ဟိုတယ်၌မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၌ အလှပဆုံး ပင်လယ်ကမ်းခြေတခုဖြစ်သည့် Mui Ne Beachသို. ပို.ဆောင်ပေးမည်။ မိုနဲကမ်းခြေသို့ ၅ နာရီခန့် (220km ~ 5hours drive). မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးဆက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိုနဲကမ်းခြေ Cay Nhan restaurant တွင်နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Grand Canyon အသေးစားလေးလို တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ Fairy Stream သို.သွားရောက်ပြီး စမ်းချောင်းငယ်တစ်လျှောက် လမ်လျှောက်ကာ အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ ရိုက်ယူနိုင်ပါသည်။ တံငါရွာများကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။ မိုနဲ့ကမ်းခြေ ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ Red sand dunes and White sand dunes(သဲ ဖြူ နှင့် သဲနီ တောင်ကုန်းများ) နှင့် Lotus lake သို့ သွားရောက် လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို.နောက် ဟိုတယ်၌ check in လုပ်၍ မိုနဲကမ်းခြေတွင် ရေကူးနိုင်ပါသည်။ ညစာကို Vietnam home restaurant တွင် စားသုံးပြီးနောက် မိုနဲကမ်းခြေတွင် တစ်ညတာအိပ်စက်နားခိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
– Truc Lam pagoda, and take Cable Car(round trip) to Robin Hill 1600m (a cable car toa2300 meters with an impressive panoramic view, to visitapine covered island in the middle of Tuyen Lam Lake) .
– Datanla waterfall, (one of the famous waterfalls in Dalat), take Datanla roller coaster which is used both asathrill attraction and also asareal transportation system .
Free time for explore Dalat night market. Dinner at Nha Toi restaurant. Overnight in Dalat.
မနက်စာသုံးဆောင်ပြီ:နောက် အေးချမ်းသာယာလှပတဲ့ ဒါလက်တောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်ပါ သည်။ လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ၃နာရီခွဲခန်. (160km ~ 3.5hours drive)မောင်းနှင်ရပြီး တောင်တက်လမ်းမှာ အကွေ. အကောက်များသည့်အတွက် ကားမူတတ်သူများအနေဖြင့် ရှူဆေးဘူး နှင့် အနွေ:ထည်များဆောင်သင့် ပါသည်။ ဒါလက်မြို့ တွင် နေ့လည်စာ သုံးဆောင် ပြီးနောက် ဒါလက်မြို့၏ အထင်ကရနေများကိုစတင်လည်ပတ်မှာဖြစ် ပါသည် ။
Visit Truc Lam Monastery (the largest one nationwide) သုိ့ Robin တောင်ကိုဖြတ်ကာ ကေဘယ်ကားဖြင့် ဒါလက်မြို့ ကို အပေါ်စီးက လွမ်းခြုံပြီး မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Dantanla ရေတံခွန်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေတံခွန်သို့ သွားရာလမ်း တွင် slide coaster စီးရင်း ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စရာအတွေ့အကြုံသစ်ကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Dalat night market ကို လေ.လာကြည့်ရှုရန် မိမိကိုယ်ပိုင်အချိန်ရရှိပါမည်။ ညစာကို Nha Toi restaurant တွင် စားသုံးပြီးနောက် ဟိုတယ်၌ check in လုပ်ပါမည်။ ဒါလက်မြို့ တွင် တစ်ညတာအိပ်စက်နားခိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
Lunch at Coi Xay Gio restaurant.
– Crazy House: A free-wheeling architectural exploration of surrealism, Hang Nga Crazy House isajoyously designed, outrageously artistic private home. Dinner at Pho Nuie resturant then go to airport for taking flight to Hanoi. O/n in Hanoi.
DALAT DEPARTURE – HANOI ARRIVAL
Vietjet Flight No: VJ404 (DLI)19:05 pm – (HAN)20:55 pm
ဟိုတယ်၌ မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် check out လုပ်ပြီး
Dalat City’s flower garden ပန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်သို့သွားရောက်လည်ပတ် ပါမည်။
Bao Dai ဘုရင့် နန်းတော် ၌ ရှေးဟောင်းနန်းတွင်း အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်နိုင် ပါသည်။
Valley of Love or Crazy House (Valley of Love) အချစ်ရွာလေးလို့ တင်စာထိုက်အောင် ပန်းပေါင်းစုံနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ Crazy House သို. သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ (နာမည်နှင့် လိုက်အောင် ဖန်တီးထားသော ဗိသုကာလက်ယာများနှင့် သူမတူတဲ့ ဒီဇိုင်ကြောင့် Crazy House ဟုခေါ်ပြီး Hang Nga အမျိုးသမီး ကတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် Hang Nga Guesthouse ဟုလည်းခေါ်သည်။ )
ညစာကို Pho Nuie resturant တွင် စားသုံးပြီးနောက် ဟနွိုင်းမြို.သို. ခရီးဆက်ရန် လေဆိပ်သို. ပို.ဆောင် ပေးပါမည်။ ဟနွိုင်းမြို.တွင် တစ်ညတာအိပ်စက်နားခိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
After breakfast at hotel , go to vsit Ho Chi Minh Mausoleum, One pillar Pagoda, Temple of Literature, Hoan Kiem Lake, Ngoc Son Temple, Tran Quoc Pagoda, West Lake, Dong Xuan Market . After lunch with buffet at restaurant then go Halong. Dinner at Bangkok resturant. O/n in Halong.
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Ho Chi Minh Mausoleum, Hochiminh resident, One pillar Pagoda နှင့် Temple of Literature, Hoan Kiem Lake, Ngoc Son Temple, Tran Quoc Pagoda, West Lake, Dong Xuan Market သို. သွားရောက်လေ့လာမည်။ စားသောက်ဆိုင်၌ နေ.လည်စာ Buffet သုံးဆောင်ပြီး Haong သို. ခရီးဆက်မည်။
Halong ဟိုတယ်တွင် အနားယူ အိပ်စက် ပါမည်။
Hanoi မြို့၏ စည်ကားသောနေရာ တစ်ခုဖြစ်သော 36 Old Streets သို့ တွင် လည်ပတ် ဈေးဝယ် ထွက်ရပါမည်။ နေ.လည်စာ International buffet သုံးဆောင်ပြီးနောက်
DAY 6: HALONG - HANOI DEPARTURE – YANGON ARRIVAL ( B/L/D)
After breakfast at hotel go visit Halong bay take Halong bay _ listed asaWorld Heritage Area of outstanding natural beauty. The trip will bring you an unforgettable memory of Halong Bay.
Boat will stop at Thien Cung cave for sightseeing. Especiallyafresh seafood lunch is served on board during cruise then go to Noi Bai airport to return to Yangon by FLIGHT No. VN-957 4:35pm departure from Hanoi to Yangon.
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေ အနှစ် စာရင်းဝင် ဟလောင်းပင်လယ်အော်၏ အလှအပများကို အပျော်စီးသဘောင်္ဖြင့် ကြည့်ရှုခံစားကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို အပျော်စီးသဘောင်္ပေါ်တွင် ပင်လယ်စာဖြင့် အရသာရှိစွာသုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ နာမည်ကျော်သော Thien Cung cave တွင် လည်ပတ်လေ့လာနိုင်ရန် ရပ်နား ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို.နောက် ဟနွိုင်းမြို.ပြန်၍ ရန်ကုန်မြို.သို. FLIGHT No. VN-957 16:35 pm ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ရန် ဟနွိုင်းမြို.၏ Noi Bai airport လေဆိပ်သို. ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။
Quotation in USD/PAX (Tour Package Cost only not including airfare)
Hcm: Hoang Phu Gia 3*
Muine: Peace Resort 3*
Dalat: Cam Do hotel 3*
Hanoi: Delight 3*
Halong: Van Hai 3*
Hcm: Oscar Saigon 4*
Muine: Dadam Cuc 4*
Dalat: La sapinnet 4*
Hanoi: Nesta 4*
Halong: Heritage 4*